बोल्दा बोल्दै पाइन्ट खुस्किए पछि अन्तराष्ट्रिय बेइजत ! (भिडियो सहित )::News from Nepal
बोल्दा बोल्दै पाइन्ट खुस्किए पछि अन्तराष्ट्रिय बेइजत ! (भिडियो सहित )
संसार पनि बढो विचित्रको छ । कहिलेकाँही बढा अनौठा अनौठा समाचार हरु आइरहेका हुन्छन् । प्रविधीको विकासले संसारलाई यति सानो बनाएको छ कि संसारको जुन सुकै कुनामा घटेको कुरा किन नहोस् एकै छिनमा संसार भाइरल भैहाल्छ । आहिले सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो निकै भाइरल भइरहेको छ । एकजना भीडको बीचमा भाषण गरिरहेका हुन्छन् ।
बोल्दाबोल्दै उनको पाइन्ट खुस्किन्छ । सबै मानिस गलल हाँस्छन् । फेसबुक ट्वीटरमा भाइरल भइरहेको यो भिडियोलाई लिएर विभिन्न किसिमका अफवाह फैलिरहेको छ । भाजपा र कांग्रेस समर्थक भारतीयले एकअर्को पार्टीलाई व्यंग्य गर्न यो भिडियो प्रयोग गरिरहेका छन् ।
कतिपयले व्यक्ति भाजपा नेता तथा राजस्थानको अजमेरका उम्मेद्वार राकेश परिख भएको दाबी धेरैले गरेका छन् । भाजपा समर्थकले कांग्रेस उम्मेद्वार राकेश पारिखको भिडियो भन्दै शेयर वा पोष्ट गरिरहेका छन् । यो भिडियोको वास्तविकता भने अर्कै छ ।
खासमा यो पुरानो भिडियो हो । भिडियोमा भएका व्यक्ति उत्तराखण्डको जसपुरका नगर परिषद अध्यक्ष मोहम्मद उमर सिद्धकी हुन ।
नगरपालिका निर्वाचनका दौरान भएको एक कार्यक्रममा उनको पाइन्ट खुस्किएको थियो । उनी कांग्रेस र भाजपाका नेता होइनन ।
आफू त्यसबेला बहुजन समाजवादी पार्टीमा भएको र चुनावी अभियानका दौरान आफ्नो पाइन्ट खस्किएको उनको भनाई छ । पारिख र उनको अनुहार करीब मिल्छ । –एजेन्सीको सहयोगमा
Mr Rakesh Pareekh BJP candidate from Ajmeer was giving speech when his pants fell down. 🤣
Digital india@Shehla_Rashid @shahfaesal @mlalangate @MusadiqAalam @DarMudasir10 pic.twitter.com/nkc1tXYGJj
— moosa manzoor (@moosamanzoor111) April 24, 2019
कुकुरहरु किन एउटा खुट्टा उचालेर पिसाब फेर्छन् ? यस्तो छ रोचक कारण
तपाईले कहिल्यै विचार गर्नु भएको छ रु कुकुरहरुले पिसाब फेर्ने बेलामा सधै खुट्टा उचालेर ठाडो चिजमा मात्र पिसाब फेर्छन् । के पिसाब फेर्न ठाँउ नभएर हो रु तर होइन् , किनभने कुकुरलाई पिसाब फेर्ने जति नै धेरै ठाउँ दिए पनि उनीहरु रुख, गाडी, पर्खाल या त कुनै यस्तै ठाडो वस्तुमा पिसाब फेर्छन् । किन होला रु आज हामी तपाईलाई यसको अनौठो कारण बताउन गइरहेका छौँ ।
वास्तवमा डनहरुको जस्तै कुकुरहरुको पनि आफु राजा बन्ने एक इलाका हुन्छ । जहाँ आफ्नो टोलको कुकुरहरु भन्दा अन्य कुकुर प्रवेश गर्न पाउदैन् । तपाईले देख्नु भएको होला , अन्य कुकुर आउँदा लखेटेको । त्यसैले आफ्नो इलाकाभन्दा बाहिर गएर कुुकुरले मानिसहरुलाई पनि टोकदैन् । उल्टै पुच्छर लुकाएर हिड्छ ।
त्यसकारण आफ्नो इलाकामा अन्य कुकुरहरु प्रवेश गर्न नपाउन भनेर कुकुरले आफ्नो अनुहारभन्दा अग्लो ठाँउमा खुट्टा उचालेर पिसाब फेर्छन् । ताकि अन्य कुकुरले गन्धबाट थाहा पाउँछन् । त्यसैले कुकुरहरु सधैँ एउटा खुट्टा उचालेर रुख, गाडी, पर्खाल वा पिल्लरमा पिसाब फेर्छन । –एजेन्सीको सहयोगमा
पार्टीहरु किन जुट्छन्?, किन फुट्छन् ? ?
वैष्णवको खाना पकाएर कोपरामा पस्कने अघोरीलाई के भनौँ ?
अँध्यारोको ब्यापार फर्काउने खेल
‘नेपाली पत्रकारितामा व्यापक पार्टीकरण’
विकासप्रेमि रविन्द्र अधिकारीलाई कामबाटै सम्झने हो !
पढाई पैसाकै लागि हो त?